Home CAYAARO Arsenal oo garaacday Chelsea
Ciyaaro-(Berberanews)-Arsenal ayaa guul muhiim ah ka gaadhay Chelsea si ay u soo afjarto todobadii kulan ee ay ciyaartay iyagoo aan wax guul ah ka gaarin Premier League isla markaana cadaadiska ka yareeya tababare Mikel Arteta, kuna guulaystay 3-1.
Laba gool oo qaybtii hore ah ayaa gogol xaadh u ahaa guushii ugu horreysay ee ay Gunners ka gaadho heerka koowaad tan iyo 1dii Nofembar.
Alexandre Lacazette ayaa dariiq qaldan u diray goolhaye Edouard Mendy kaas oo rigoodh u dhaliyay isla markaana Granit Xhaka ayaa 10 daqiiqo ka dib kubbad laaga xorta ah oo layaableh soo laagay si uu kooxda Arteta gacanta ugu dhigo.
Ka dib karoos uu soo dhigay Bukayo Saka ayaa markaas ku dhacay geeska sare bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta taasoo ciyaarta ka dhigtay inay dhaafsiiso kooxda martida aheyd.
Tammy Abraham ayaa shabaqa ku hubsaday kubad uu ka helay meel aad u dhow ciyaarta isagoo ka dhigay shantii daqiiqo ee ugu danbeysay kooxda martida loo ahaa, Jorginho ayaa markaas arkay rigoodhii liitay ee uu badbaadiyay Bernd Leno Laakiin waxa ay aheyd qaab ciyaareed kale oo aan fiicneyn oo ay sameeyeen kooxda Frank Lampard, oo seegay fursad ay ku geli lahaayeen kaalinta labaad.
Waxay ahayd guul u qalantay Arsenal, oo u soo fuulay kaalinta 14aad.
Koobka premier league
Previous articleDamaca Kenya ee Kursiga Madaxweyne 2021
Next articleWaasiir Isgaadhsiinta JSL Oo U muuqda Masuul Aan fahmin jihada Siyaasadeed Ee dalku U Socdo Iyo Dhaliilo Dulhoganaya!